चन्द्रमामा बीउ टुसाएको समाचारले सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूलाई गाली ! « News24 : Premium News Channel
काठमाडमाैं । चीनले विकासमा विश्वमै चमत्कार गरिराखेको छ । पछिल्लो समय चिनले विभिन्न चमात्कार देखाउँदै आएको छ । ‘गे्रट वाल’ विश्वकै लामो र ठूलो पर्खाल विश्वकै सबैभन्दा लामो समुद्री पुल निर्माण चीनले गरिसकेको छ । यति मात्रै होइन चीनले कृतिम चन्द्रमा र कृतिम सुर्य समेत बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
चीनले यस्तो चमात्कारहरु धेरै गरिसकेको छ । चिनियाँ अन्तरिक्ष अभियान चांग’अ ले चन्द्रमामा लिएर गएका केही बीउहरू टुसाएको अन्तराष्ट्रि समाचारहरुले जनाएको छ । ‘चीनले चन्द्रमामा पठाएको कपासको बीउ टुसायो’ भनेर समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यापक टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सुराज पाैडेल व्यङ्ग्य गर्दै लेख्छन्, ‘चीनले चन्द्रमामा कपास उमारेछ, नेपालले चाह्यो भने सूर्यमा पनि नेता उमार्छ।’
फेसबुकमै दिप्सन राई नाचिज लेख्छन्, केहिगर्न जाँगर नचल्दा धन्न… छिमेकी राष्ट्र चीनले कृत्रिम चन्द्रमा वनाउदैछरे भन्ने कुराले अलिकति भए पनि जाँगर आयो कतै वा म पनि त्यो चन्द्रमामा कपास रोप्नु भ्याउछु कि !
शोविता सिम्खडा ट्वीटरमा लेख्छिन्, “चन्द्रमामा कपास फुलेछ हजुरआमालाई ल्याइदिऊँला भनेको हजुरआमा मख्ख हुनुभएपछि म पनि मख्ख।”
सन्ताेष ट्वीटरमा लेख्छन् , ‘छिमेकी कम्युनिस्ट सरकारले चन्द्रमामा कपास उमार्‍यो । हाम्रा देशका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको बोली सुन्दा त्यही कपास कानमा ल्याएर कोचौँ झैँ लाग्ने!!!
समित नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गर्दै ट्वीटरमा लेख्छन् , चीनले चन्द्रमामा कपास खेती गरिसक्यो, नेपाली भने देशमा नेता खेती गर्दै बसौँ ।
भास्कर लेख्छन्, ‘हाम्रो देशमा महिनावारी, छाउपडीको चर्चा परिचर्चा सकेकै छैन । उता चाइनाले चन्द्रमामा कपास उमारिसक्यो। धत् हामी नेपालीको नियति ।’
टुइटेश्वर लेख्छन्, चीनले चन्द्रमामा कपास उमार्‍यो । नेपाल पनि के कम, टुटल र पठाओलाई प्रतिबन्ध लगाइ दिए । सरकारले चान्स पाए गर्छ ।
चन्द्रमामा कुनै पनि जैविक पदार्थ उम्रिएको यो पहिलो घटना हो। चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार चन्द्रमामा पठाइएका कपासको बीउ उम्रिएर तिनमा कोपिला लाग्न थालेको छ। यसलाई लामो समय लाग्ने अन्तरिक्ष अन्वेषण अभियानका सम्बन्धमा उल्लेखनीय कदम भनिएको छ।
उक्त यान गत ३ जेनुअरीका दिन चन्द्रमाको पछाडि पट्टिको क्षेत्रको भौगोलिक अनुसन्धान गर्ने उपकरणहरूसहित त्यहाँ अवतरण गरेको थियो।